Komisheni Inodzivirira Huori Inoda Masimba Kuti Ishande Zvakadzama
Komisheni inoona nezvekudzivirirwa kwehuwori, yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, iyo inofanirwa kunge ichishanda yakazvimirira, inoti handiwo mamiriro akaita zvinhu sezvo pane kupindira kuri kuitwa nemamwe mapazi ehurumende mubasa rayo. Komisheni iyi inotiwo haina zvimwe zvinhu zvekuti ikwanise kurwisana kana kudzivirira huwori munyika.
Sachigaro vekomisheni iyi, VaDanford Chirondo, vaudza komiti iyi kuti kunyange hazvo komisheni yavo ichifanira kushanda nemamwe mapazi ehurumende, vanofunga kuti vanofanira kupihwa masimba ekusunga pamwe nekuendesa vanhu kumatare avo vavanenge vaferefeta.
VaChirindo vati pasi pebumbiro remitemo yenyika, komisheni yavo haifaniri kuve iri pasi pebazi rehurumende, uye inofanira kunge ichizivisa dare reparamende mabasa aiyiri kuita.
Pari zvino komisheni iyi inoshanda iri pasi pebazi rinoona nezvemukati menyika, uye komisheni iyi isati yavepo, bazi iri ndiro raiona nezvekudzivirirwa kwehuwori.
Vatiwo komisheni ichange ichienda kudare repaparamende kuti ijekese mitemo maererano nebasa rekomisheni yavo.
Vati komisheni yavo yakatomboendeswa kumatare edzimhosva ichinzi yainge isina masimba ekusunga vanhu vakati kunyange matare edzimhosva akatonga kuti vane simba rekusunga, izvi zvinofanira kujekeswa mumitemo yenyika.
VaChirindo vatiwo komisheni yavo haikwanisi kuita basa ravo nemazvo nekuti iri kupihwa mari shomanana kana zvichienzaniswa nemari yavari kuda. Vatiwo vashandi vavo vari kutambira mari shoma izvo zvinoita kuti vapindwe nemiyedzo yekutambira mari yechioko muhomwe kubva kune avo vavanenge vachiferefeta.
VaChirindo vatiwo nekuda kwekushaikwa kwemari, komisheni yavo ine vashandi makumi mashanu nevanomwe chete, asi iyo ichida vashandi mazana maviri nevana kuti ikwanise kuvhura mahofisi mumatunhu ese ari munyika pamwe nekuita basa rayo nemazvo.
Zvichakadai, kubva muna 2009, pane nyaya chiuru nemazana mashanu nemakumi matanhatu nenomwe dzehuwori dzasvitswa kukomisheni iyi. Nyaya mazana masere nemakumi manomwe nenomwe ndedzemaindasitiri, mazana mashanu dzinobata mapazi ehurumende, uye zana nemakumi mapfumbamwe, dzinobata makambani ehurumende.
Zvichakadai, munyori mubazi rezvemukati menyika, VaMelusi Matshiya, vaudzawo komiti imwecheteyo kuti mapurisa ari kutadza kuita basa rawo nemazvo nekuti haana michina, mari inovakwanira pamwe nezvipfeko zvekuti akwanise kuita basa nemazvo.
Vatiwo huwori huru mumapurisa huri kukonzerwa nemari shoma dzavanotambira. Vati zvakakosha kuti hurumende iwedzere mari dzemapurisa kuitira kuti vapinde mumiyedzo yehuori.